Nihatsara ny kalitaon’ny asa eny Ivato 40 minitra dia tafavoaka ny seranam-piaramanidina
Seranan-tsambon’i Toamasina Entana 500 kaontenera hopotehina na hatao lavanty
Kaontenera 500 isa feno entana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina no voalaza fa tsy maintsy hopotehina na atao lavanty ireo entana tsy misy mpaka. Mihitsoka sy mibahan-toerana ao amin’ny faritry ny ladoany ireo kaontenera ireo.
Feno 60 taona ny fandraharahana ny fonja Hezahina ny fanajana ny zo maha olona
Notanterahina omaly alakamisy 18 jolay teny amin’ny minisiteran’ny Fitsarana Anosy ny faha-60 taonan’ny fandraharahana ny fonja. Lohahevitra tamin’izany ny hoe:
Filaminana, fitiavana, fifanampiana Tokony hatao andron’i Mandela ny andro rehetra
Marihina amin’ny fomba ofisialy anio 18 jolay ny andro ho an’i Nelson Mandela na ny “Mandela Day”.
Hita taratra ny fihatsaran’ny tolotra eny amin’ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena eny Ivato amin’izao fotoana, raha ny fanamarihan’ny mpandeha.
Nisy ny fiovana sy ny fihenan’ny fahasahiranana noho ny fandraisana fepetra hahafaha-manome fahafaham-po ny mpandeha. Raha adiny 3 teo aloha ny fotoana lanin’ireo mpandeha vao tafavoaka ao Ivato, 40 minitra eo sisa amin’izao. Raha hiverenana ny tantara, voatery tsy maintsy natsahatra ny fisavana ny entan’ny olona vao tonga tamin’ny fiaramanidina nanomboka ny fiandohan’ny volana martsa lasa teo. Nampahafantarin’ny minisitry ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro Atoa Joël Randriamandranto ny 01 martsa nandritra ny fifanomezana toromarika arak’asa tamin’ireo mpiasan’ny seranam-piaramanidina io fepetra io. Nohazavainy fa ny entan’ny mpandeha dia efa voamarina tsara mialoha ny hiaingany any amin’ny fadin-tseranan’ny firenena iaingana. Notsipihany anefa tamin’io fotoana io fa tsy mahasakana ny mpiasan’ny fadin-tseranana hanao ny fisavana lalina ny entana izany raha toa ka ilaina. Omena ny toromarika feno ny manan-draharaha eny amin’ny seranam-piaramanidina rehefa tafiditra ao.